Fanatsarana mahatalanjona ao amin'ny fakantsary an'ny iPhone 13 | Vaovao IPhone
Fanatsarana mahatalanjona ny fakantsary iPhone 13
Tsy mijanona ny tsaho sy ny vaovao momba ny maodely iPhone manaraka, nantsoin'ny ankamaroan'ny haino aman-jery ho toy ny iPhone 13. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba ny fiasa fandraketana vaovao ho an'ny fakan-tsary any aoriana sy sivana fanodinana sary vaovao izahay. Araka ny fampahalalam-baovao malaza Bloomberg miaraka amin'i Mark Gurman no mitondra azy, iPhone 13 dia hanampy maody sary ho an'ny horonan-tsary sy endrika endrika avo lenta kokoa noho ny codec Apple ProRes.
Fanatsarana ny fandraketana horonantsary sy sary iPhone 13
Matetika io no iray amin'ireo fanovana lehibe amin'ny Apple iPhones vaovao, fa amin'ity tranga ity ny maodely manaraka ny iPhone 12 dia mety hanana fisondrotana lehibe amin'ny kalitao raha oharina amin'ilay maodely ankehitriny. Amin'izany dia tsy midika akory izany fa ity iPhone 12 ity dia manana fakantsary ratsy na tsy manome antsika ny tsara indrindra amin'ny tsena amin'ny fotoana fandefasana azy, saingy mazava ho azy fa momba ny fanatsarana hatramin'ny farany ary amin'ity tranga ity dia toa ilay Saripika ny maody izay dia vokatry ny manjavozavo any aoriana misy rehefa manao horonantsary izahay, manao antso amin'ny alàlan'ny FaceTime sy bebe kokoa amin'ny iPhone 13 vaovao.
Araka ny voalaza ato amin'ity lahatsoratra ity Ny fisongadinana horonan-tsary ProRes dia tsy ho hita amin'ny iPhone 13 Pro sy iPhone 13 Pro Max ihany. Etsy ankilany, ny sary dia hanatsara ny sary ihany koa amin'ny alàlan'ny sivana mba "hanehoana loko amin'ny hafanana mafana na mangatsiaka kokoa raha mitazona ny fotsy tsy miandany." Araka ny fanazavan'ilay mpampita vaovao malaza dia hanana safidy sivana tsara kokoa amin'ny sary isika ary izany rehetra izany dia hanolotra kalitao miavaka amin'ireo sary nalaina tamin'ny iPhone 13 vaovao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 13 » Fanatsarana mahatalanjona ny fakantsary iPhone 13
Ahoana ny fampidinana ny COVID Certificate amin'ny mpihazona ny karatrao amin'ny iPhone
Ny iOS 15 dia hampifandray ny AirPods antsika amin'ny Apple ID ao anatin'ny tambajotra fikarohana